Ihe nrụpụta igwe na -ebuli ihe kacha mma na -ebuli elu Keyuan
A na-eji mmemme PLC na-ejikwa ụgbọ ala servo, nke nwere ikike mgbochi oke ibu, arụmọrụ kwụsiri ike na obere ọsọ, njikwa mma, nzaghachi ngwa ngwa, mmetụta dị elu, na-ebelata oke okpomọkụ na mkpọtụ.
A na -ejikarị igwe eji eme ihe na -ebugharị ma na -ebugharị ihe siri ike na ụlọ ọrụ ọgwụ.Ọ nwere ike na -arụ ọrụ na haixer, igwe igwe granule, igwe mbadamba, igwe mkpuchi. Igwe na -ejuputa capsule, wdg. ya mere.
Enwere ike iji usoro YTY na -agagharị agagharị na telescopic hydraulic hoist yana igwe nkwadebe dị ka pulverizers, granulators, mixers, tablet devices.cladding igwe na capsule stowing machine.lt nwere ike ịkwalite usoro teknụzụ wee gbochie uzuzu na -efe efe na mmetọ obe, belata ike ọrụ, bulie nrụpụta ọrụ, ma gbochie mkpuchi ihe .Ọ bụ ezigbo igwe maka osisi ọgwụ iji mata mmepụta GMP.
Ihe mejupụtara igwe a bụ chassis, colurmn, systeming.etc.Mgbe ọ na -arụ ọrụ, kpatụ ite a na -ebubata ihe n'ime ndụdụ nke ihe na -ebuli elu, bido bọtịnụ na -ebuli ya na ihe ga -eme ka ọ dị mma. Bugharịa chassis ahụ iji chọpụta njikọ mechiri emechi na ngwa nchaji. Malite valvụ nrubeisi iji nyefee ihe ha na usoro ọzọ.
1. A na -eji igwe anaghị agba nchara arụpụta mpụta igwe ahụ. A na -emeso uzo ogwe aka na -ebuli elu maka nkewa ụdị ákwà mgbochi ma nwee ọmarịcha ọdịdị.
2. Igwe a na -ejikọ njikwa eletriki na nke hydraulic, ma na -ahụ na arụmọrụ kwụsiri ike na ntụkwasị obi. Ejiri sistemụ arụ ọrụ rocker, a na -arụ ọrụ ya n'ụzọ dị mfe ma na -agbanwe agbanwe, enwere ike ịkpọchi ya na akpaghị aka n'ogo ọ bụla iji mezuo ihe dị iche iche achọrọ na mmepụta.
3. Okpokoro telescopic pụrụ iche na -eme ka o kwe omume ịkekọrịta hoister na -agagharị agagharị n'etiti mpaghara dị iche iche nke ime ụlọ.
4. Igwe a nwere ebe nchekwa mmanụ megide mwepụ nke hydraulic ka ebe ndị na -adịghị ọcha ghara imetọ n'ihi nsị mmiri.
5. Mkpọrọ hydraulic nke igwe nwere njigide njigide akpaka. Yabụ na ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ike daa, ogwe aka na -ebuli elu ka nwere ike nọrọ n'ọnọdụ mbụ ya.
6. Polyurethane caster wheel nke emepụtara na Hong Kong na -enye nchekwa maka ala na mpaghara dị ọcha ma mee ka ọ dị mfe ịkwaga igwe.
7. A na-eji mmemme PLC na-ejikwa servo moto drive, nke nwere ikike mgbochi oke ibu, arụmọrụ kwụsiri ike na obere ọsọ, njikwa mma, nzaghachi ngwa ngwa, mmetụta dị elu, ma belata okpomọkụ na mkpọtụ.
8. Ụdị ngwa ọhụrụ dị nkenke ma dị mfe ịrụ ọrụ. Valvụ nru ububa na -adọkpụ dị mfe ịchịkọta, kwasasịa ma kpochaa, na -emezu ihe GMP chọrọ na ụlọ ọrụ ọgwụ. Akụrụngwa nwere uru nke ịdị arọ dị mfe, nnukwu ibu na ịdị mma na -arụ ọrụ kwụsie ike. wiil ndị buru ibu nwere obere rolingresistance na ngagharị dị mfe.Ọ nwere ọtụtụ ebumnuche, ịchekwa oge, ịchekwa ọrụ na ibelata mmetọ gburugburu ebe obibi.Ọ nwere ihe nrụzi dị ala, nke nwere ike belata ọnụ ahịa mmezi.
Nke gara aga: Ofu ihe na -ebuli igwe
Osote: Ebe nri nri ntụ ntụ
Pharma ofu ihe na -ebuli igwe na -ebufe